अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/अष्ट्रियामा आफ्नै तीन सन्तानको ह’त्या गर्ने नेपाली म’हिला को हुन् ? किन यस्तो गरिन् ?
काठमाडौं। अष्ट्रियामा एक नेपाली महिला आफ्नै तीन सन्ता’नको ह’त्या गरेको अ’भियोगमा प’क्राउ परेकी छिन् । उनले शनिबार आफ्ना तीन सन्ता’नको ह’त्या गरेपछि आफैं प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन् । उनले घट’नास्थलमा प्रहरी आएपछि आफैंले आफ्ना तीन सन्तानको ह’त्या गरेको बताएकी थिइन् । ती महिलालाई प्रहरीले नि’यन्त्र’णमा लिएर थप अ’नुसन्धा’न गरिरहेको छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **